Afar taxane Isbaanish ah oo kugu dhejin doona | Ragga Stylish
Khayaaliga telefishanka adduunka ayaa ku jira caafimaad aan caadi ahayn, iyo taxanaha Isbaanishka, dabcan, kama reeban.
Soo bandhigida taxanaha Isbaanishka waxaa ka mid ah taxane aad u qabow oo kugu jiidan doona inaad kufasho qaybo ka mid ah oo qibro weyn leh, majaajillo, riwaayad ama sheekooyin ficil.
1 Wasaaradda waqtiga
3 Ka soo horjeedda
4 Casaarka maqaarka
Taxanaha abaalmarinta-abaalmarinta on a hay'ad qarsoodi ah oo u heellan ka hortagga dadka inay isticmaalaan albaabada waqtiyada kale inaad taariikhda u badasho faa iidadaada. Waxaa lagu amaanay qoraalkeeda, taageerayaasheeda daacada ah ayaa si xiiso leh u sugaya sirta ah in uu jiri doono iyo inkale xilli afaraad dhaqso loo soo bandhigi doono.
Madal: Netflix iyo Movistar +
Majaajilo ka timid abuurayaasha 'Wicitaanka' oo ku saabsan wakiil ka socda jilayaasha oo siiya miisaaniyaddeeda hooseysa qiyaaso badan oo maskaxeed. Shan dhacdo oo ay ka buuxaan cameos iyo baashaal heer sare ah oo kugu martiqaadaya in lagugu raaco qaab qaniinyo. Haddii aad rabto wax dheeraad ah, waad ku farxi doontaa inaad ogaato in Netflix ay ku dhawaaqday xilli ciyaareedkii labaad ee 2018.
Ka soo horjeedda
Haweeney da ’yar (Maggie Civantos) ayaa galeysa xabsiga Cruz del Sur si ay ugu xukunto toddobo sano oo xarig ah. Taasi waa barta laga bilaabo 'Vis a vis'. Laakiin wax badan ayaa jira. Meeshu waxay tijaabin doontaa iska caabbintooda iyo awooddooda badbaadin iyadoo loo marayo iska horimaadka maxaabiista kale iyo dhammaan noocyada xaaladaha ba'an. Horudhaca xilli-ciyaareedka saddexaad waxaa loo qorsheeyay guga.
Waa mid ka mid ah taxanaha ugu wanaagsan ee Isbaanishka lagu qiimeeyo. Laba xilli oo u gaar ah oo sheegaya sida koox gaar ah oo burcad ah (xubnahoodu u adeegsadaan magacyo magacyo ahaan) ay afgambi uga fuliyaan Xarunta Qaranka ee Mint iyo Stamp si ay u qaataan 2.400 bilyan oo euro. Haddii aad jeceshahay filimada ku saabsan dhaca, waad jeclaan doontaa 'La casa de papel'.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Tixraacyadii Isbaanishka ee ugu quruxda badnaa uguna mudnaa
Sida loo hagaajiyo armaajo qasan oo tallaabo tallaabo ah